Ukukhanyisa emigwaqweni nasemapaki, tikwele izingadi, izakhiwo kanye izingadi akakwazi ngokuthi umqondo omusha. Isiko ngokuzimisela bafaka izibani zokuhlobisa yazibonakalisa zimpande Russia kusukela ekuqaleni kwekhulu le-18. Namuhla, akukho ukukhanya ebusuku izingadi zomphakathi ingathikameza traffic izindawo. Kodwa ukubeka kanye amathrekhi endaweni yabo suburban ka izibani engavamile up ngeke ukhubeke ebumnyameni.
Ingabe ngidinga isibani engadini
Phakathi imisebenzi esemqoka okumele wenziwe ukukhanyisa zokuhlobisa kuleli zwe, ukubizwa ngokuthi lokhu okulandelayo:
noma ukuphepha lobuchwepheshe;
Zalapho yohlobo kuqala ukufakwa kuphela ukusebenza injongo. Kufanele unikeze travel ukhululekile ngokusebenzisa kuhlwa nobusuku. Kuhlanganisa izibani ukudala i umphumela khona abanikazi ukudukisa zitha futhi ukuvikela engadini kusukela Ukungena yabo.
ukubukeka colorful kakhulu lesi sakhiwo, esikhanyayo ngendlela ekhethekile ngamaholide. Isebenzisa izibani ezinemibala, nemiklamo kanye strip LED. Izakhi yezakhiwo zezakhiwo ezishisa kakhulu zikhipha izinhlayiyana kokufaka ohlangothini ukukhanyisa zokuhlobisa.
Ekuqaleni ukuhlobisa flowerbeds ukusiza lezi zibani engavamile esime lokhu imibala Uzame noma izibalo ezithakazelisayo. Setha phakathi izitshalo, ntambama banezela ubuhle nobusuku kukhona umthwalo obusebenzayo futhi akhanyisele engadini.
Indlela Spice up ingxenye ebusuku izindlela ezilula
Kumnandi uma ungenayo ukuphambuka ebumnyameni sezindlela engadini. UMpheme, isango futhi isango, umnyango on-site yokupaka futhi ukuba uqeqeshwe ngenxa yezizathu zokuphepha. Ngezinye izikhathi kwanele ukuba avale round amagatsha amaningana izihlahla elikhazimulayo kuze kudabuke umhlane, ukufeza umphumela oyifunayo. Nakuba ezifana ukukhanyisa zokuhlobisa kuleli zwe - kuba nobuncane amathuluzi atholakalayo njengamanje. Ngendlela efanayo kungenzeka ukuhlonza imingcele impahla yabo, ngakho bebonakala kahle ebumnyameni. Indawo izibani encane azungezwe kocingo inika nokuzola umuntu ngokwengqondo. Ochwepheshe ukweluleka ukugwema ukukhanyisa ngokweqile esakhiweni, njengoba abantu ukuhambisa kahle ensimini amnyama ekhaya okwanele. It is isakhiwo main iklanyelwe ukuba maphakathi extravaganza ukukhanya.
Umkhawulo Kunconywa nangezindlela elikhanyayo ukugqamisa arbors, nezihlahla kanti ezinye izihlahla. Okuhlobisa engadini ekukhanyiseni flowerbeds namachibi kwanele ukukhomba izindlela ezikhethekile. Kubukeka omkhulu elintantayo phakathi izitshalo emanzini echibini omhlophe noma ezinemibala amabhola. Lights ngesimo ukubaza amancane izimbali ibekwe phakathi izitshalo nezihlahla umphelelisi umqondo jikelele.
Main, indlu kanye zokuhlobisa
ukukhanyisa Street lihlukile ikhaya ngezindlela eziningi. Lezi zihlanganisa:
Technical izinkomba izibani;
khona noma ukungabi khona ukwesekwa;
kungenzeka ngokusebenzisa ukushisa nokubanda;
ukulondoloza kahle kuzo zonke izimo zezulu;
I elula kunazo ukusebenzisa inhlanganisela komsebenzi kanye main umthombo wokukhanya. izibani zokuhlobisa ukukhanyisa emgwaqweni luyithinta izakhi ezikhethekile okumangalisayo design jikelele isayithi. Phakathi kwabo uyakuthiwa zakudala izibani ekhandiwe yensimbi, efakwe kanye amathrekhi, noma usethe phakathi Udonga lwesakhiwo. Njengengxenye isithombe, ngeke kuphela ukuhlobisa ndawo, kodwa futhi enze umsebenzi we skylight main, egcizelela endaweni yayo yonke ezweni.
Ngu Duty imithombo ihlanganisa amadivayisi ukunikeza endaweni wathela imisebe. idivayisi okunjalo kufanele kube kude nasekhaya, futhi ngaphezu kwakho konke izakhiwo. Kuyinto elula ukufaka isibani lisemsebenzini egalaji, emnyango kwisayithi, azungezwe, e izindlu.
spotlight Small, okuyinto zikhiphela into ezithakazelisayo izakhiwo noma isitshalo esithile kufanele kube avulekile. Injongo ukusetshenziswa kwabo - ukugcizelela kunokuba ukufihla ezinye imininingwane landscape, olungaphambili lwesonto. Ubukhosi flowerbed noma yokubhukuda umngcele kungenzeka uma ukumba emhlabeni azungezwe yochungechunge we spotlight. Lesi sinyathelo ngeke kuphela kwenza umoya imilingo engadini, kodwa futhi wenza uhambo ephephile ngokuzala endaweni lapho kuhlwa.
Ukuvikelwa kanye Ukucaciswa
Ngenxa izimo zokusebenza, zokuhlobisa emgwaqweni ukukhanyisa kumelwe nezimfuno anda. Ngokwe-international ngezigaba uhlelo, class amabili Ukuvikelwa futhi subgroups eziningana. Izibani kumele bavikelwe ukugeleza kwamanzi, uthuli, eyenziwe ukushisa ukumelana kanye nomthelela-resistant glass zokuzivikela. Izinto okumele kukhethwe, ayesetshenziselwa ekukhiqizeni izinto ukumelana ukugqwala: insimbi engagqwali noma aluminium. I izici engcono ningumzimba imodeli benziwe ngezinto zemvelo noma Plexiglas. Kuthathwa idivayisi ezinhle inkomba ungasebenza izindlela eziningana: kusuka elikhanyayo ukuba dim.
Izinhlobo izibani ongaphandle
Lapho ebekwa, izindlela yokufaka kanye nezinhlobo obandayo ukukhanyisa emgwaqweni "ukukhuluma" amagama abo:
Esimisweni kahle ehleliwe zikagesi ezifakiwe usebenzisa ezihlukahlukene ukukhanyisa izingongolo. izibani zokuhlobisa futhi functional kwenzeka emazingeni amathathu. Ukuze phezulu indawo engaphezulu ezingeni umbono, kukhona ophahleni lwezakhiwo, izinsika amade futhi izindonga. Mid - izihlahla ezincane kanti ezinye izakhi ezakhiwo izakhiwo. Kushiwo aphansi zone utshani imibhede ithrekhi nezihlahla encane, izinyathelo, phansi namanzi. Ukuze uthole ephelele yi izibani zokuhlobisa ukukhanyisa emgwaqweni kufanele ngokuvumelanayo kuzo zonke zontathu lezizigaba.
Ukuhlobisa insimu ka uzungu lwakhe, futhi ukwazi ezinye namaqhinga design namasu, ungavula ingadi yakho ibe uhlobo isikhala imilingo kuze kube iholidi ngaphambi ephelele. Ukusebenzisa ukukhanyisa zokuhlobisa icebo elikhulu zingahlukaniswa ngamaqembu amagatsha amaningana. Ukusatshalaliswa izibani nokukhanya abandayo phezu ingadi encane uyakwazi zibukeke ibenze imingcele.
Ukwakha isimo ethokomele e kuvulandi, ifenisha engadini masimu izosebenzisa elithambile, ukukhanya okungaphakathi. ugesi engakhanyi amathoni efudumele kuyoba lapha kwetfulwe ngemalengiso. Isimo samaholide is edalwe uhlanganyela nemiklamo twinkling futhi emibalabala LED emapheshana.
Ukuze ekhululekile futhi ivumelane okukhanyisa izibani ingxenye esanele ukusebenzisa imibala amaningi. Kubalulekile ukulandela imithetho, okuyinto ukuthi:
ukufakwa siyakhazimula kwasemuva mhlophe ukwenza landscape ezingaphili;
Ungayisebenzisi izibani imibala egqamile phuzi futhi zibe bomvu;
phakathi izingxenye akufanele bube ngaphezu kuka-10 ukuphakama;
mhlawumbe phezu amathrekhi ukufaka izibani nokukhanya okusabalele.
Stand-yedwa noma olunezintambo: okuyinto engcono
Okuhlobisa endaweni yokuhlela ukukhanyisa, ungabhekana yokuthi kwezinye amakhona engadini kunzima ukufeza wiring. Ezimweni ezinjalo, ochwepheshe batusa ukusetshenziswa tinkhulumo, ukuqongelela ku amandla elanga emini. Ziyakwazi ukonga, abe design zanamuhla, kulula ukuzigcina uphephile ngokuphelele futhi self-equkethwe. izibani Solar ngokuzenzakalelayo lapho kuhlwa sishise ekuseni.
Ezindaweni akude kungabuye luminaires yehhashi egibele, ifakwe touch izinzwa. Abanye onobuhle zenziwa nge fixings ngesimo clothespins. Uma hang "namaqhinga" enjalo phezu kwezihlahla, uthola umhlobiso fun kakhulu. izibani okunjalo elengayo esetshenziswa futhi gazebos phezu komzila, kunoma iyiphi indawo lapho hook kungenziwa esigaxe.
Ukufakwa: Yini okufanele ufune
Ngenhla iminyango yokungena baqinise sconces abakha classical ingilazi shades. Ngaphezu zokuhlobisa, futhi zenza indima sokusebenza. Ngqo phansi ebusweni ukukhwezwa izibani imodeli. Ngezinye izikhathi athathe isimo ukubaza fabulous zezinyoni nezilwane.
Ochwepheshe bakholelwa uhlelo ukukhanyisa yimpumelelo uma iningi umthombo wokukhanya is simaskwe phakathi izitshalo in the imibhede, emibhedeni, ezihlahleni. Outdoors setha kuphela isibonelo esihle. Njengoba indawo engadini kukhonjelwe yemvelo landscape njalo izinguquko, ngezinye izikhathi nangezindlela ezihlukahlukene ukukhanya kufanele uyiswe kwenye indawo.
Le ndoda endala kakhulu emhlabeni: ungubani?
Casserole nge amazambane nenhlanzi kuhhavini: ukupheka zokupheka